पत्रकार / साहित्यकार गोपीकृष्ण ढुंगानासँग कुराकानी | samakalinsahitya.com
पत्रकार / साहित्यकार गोपीकृष्ण ढुंगानासँग कुराकानी
- युवराज विद्रोही
१. पत्रकारितामा तपाईको प्रवेश ?
शिक्षक मासिक पत्रिकामा २०५९ सालमा स्वयंसेवक बनेर केही महिना काम गरें । त्यसपछि ‘एक्काइसौं शताब्दी’ साप्ताहिकमा नजानेरै फिचर लेख्थें । सायद पत्रकारिताको सुरूवात यही थियो । छ महिनामा छोड्नुप¥यो । साहित्यिक मित्र प्रकाश सिलवालले ‘हिमालय टाइम्स’ मा प्रुफ रिडर खाली छ भनेपछि त्यहाँ करिब एक वर्ष काम गरें ।
२.कसरी पत्रकार बन्नुभयो ?
३.पत्रकारिता पेशाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
४.यो पेशामा कत्तिको पैसा कमाउनुभयो ?
५.एउटा प्रतिष्ठित दैनिक अखबारमा काम गरिरहनुभएको छ, शुभलाभको अवसर कति आउँछन् ?
६.राम्रो लेखेवापत पैसा लिनुभएको छ कि छैन ?
७.पत्रकारले ब्ल्याकमेल गर्छन् भनिन्छ नि, तपाईको बुझाई कस्तो छ ?
८.नेपाली पत्रकारिता विश्वसनीय र मर्यादित बन्न सकेको छैन, किन ?
९.दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले साना लगानीमा काम गर्ने पत्रकारलाई मान्छे गन्दैनन् भन्ने कुरा कति साँचो हो ?
१०.प्रसंग मोडौं, तपाईका सौख के के हुन् ?
११.फुर्सदको समय कसरी बिताउनुहुन्छ ?
१२.जीवनमा के गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ?
१३.तपाईको कमजोरी के हो ?
१४.सबल पक्ष पनि होलान् नि ?
१५.यस्तो कोमल मनबाट के कस्ता साहित्य सिर्जना हुन्छन् होला ?
१६.पत्रकार गीतकार पनि बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण तपाई पनि एक हो, कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
ढुंगाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भनेझैं इच्छाशक्ति र रूची भएको काम मानिसले जसरी पनि गर्दोरहेछ । खासगरि क्याम्पस पढ्न थाल्दा रेडियो नेपालमात्र सुन्न पाइन्थ्यो । बज्ने सबै नेपाली र हिन्दी गीतका शब्द र धून सबै कण्ठस्थ थिए । लाग्थ्यो, यस्तै गीत लेख्न पाए...। यसरी नै रेडियोबाट बजाउन पाए...। गीतकार गोपीकृष्ण ढुंगाना भनेको सुन्न पाए...।
१७.कतिबेला कस्ता गीत रच्नुभएको छ ?
१८.भनेपछि रोमान्टिक गीत लेख्नुहुन्छ ।
१९.कस्तो कुरा वा सन्दर्भले गीत लेख्न प्रेरित गर्छन् ?
कस्तो बेला लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरो उठेको थियो, म खासगरि रातको अन्तिम प्रहरतिर जब सुनसान समय हुन्छ र म एक्लो हुन्छु त्यतिबेला लेख्छु । कतैबाट हस्तक्षेप नहुने भएकाले शब्दहरू सलल बगेर आउँछन् । लेख्ने बेला सम्बन्धित विधाका सिर्जना पढिरहनुपर्छ अथवा कुनै सन्दर्भ वा घटनाक्रमले दिमागमा ‘हिट’ गर्नुपर्छ । गामबेंसीको गीत लेख्न अफर आएपछि त्यो साउनको महिनामा म सम्झनामा खेत रोपेको आफ्नो गाउँ पुगें । र लेखें,
‘बेसी खेत झर कान्छी, बेसी खेत झर
कान्छी आउँछु म नि जोत्न,
धानसँगै मनभरि मायाप्रिति रोप्न...।’
२०.गजलबाट साहित्य र त्यसैले डोहोयाएर पत्रकारितामा आएँ भन्नुभयो, एउटा गजलको नमूना पनि भन्दिनुहुन्छ कि ?
२१.आहा..., हतारको साहित्य लेख्नेका फुर्सदको साहित्यमा यति राम्रो कलम ? गोपीकृष्ण ढुंगानाको यो अभिव्यक्ति क्षमता पत्रकार मित्र कतिलाई थाहा छ ?
२२.बालसाहित्य पनि लेख्छु भन्नुभएको थियो, के कति लेख्नुभएको छ ?
२३.कविता पनि उत्तिकै सशक्त छन् भन्ने सुनेको छु, कति सत्य हो ?
तिमी युग बाँचिरहेकी छ्यौ,
२४.साहित्यिक लेखनमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
२५.किन ? साहित्यमा त्यस्तो के छ र ?
२६.तपाई साहित्यिक पत्रकारितामा उत्तिकै सक्रिय देखिनुहुन्छ, किन ?
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा बुधबारे परिशिष्टांक आठ पृष्ठको ‘शैली’ संयोजन गर्ने मूल जिम्मेवारी हो मेरो । तर लेखनको अर्को पाटो साहित्य भएकाले यो क्षेत्रका विषय र मुद्दाहरू ओझेलमा परेर रहेका छन् । मैले यसलाई टुलुटुलु हेर्न नसकेर दैनिक अखबारमार्फत् आमपाठकसामू पुयाउने चेष्टामात्र गरेको हुँ । कतिपय काम चाहेरमात्र हुँदैन, म यसका लागि उपयुक्त ‘प्लेटफर्म’ मा भएको कारणले यसको दुरूपयोग नगरी शुद्ध सेवाभावमा जुटिरहेको छु ।
२७.किन साहित्यका कुरा पत्रपत्रिकामा आएका थिएनन् र ?
कृति विमोचन, कवि गोष्ठी आदि गतिविधिका समाचार आउनुमात्र साहित्यिक पत्रकारिता होइन । केही व्यक्तित्वको जीवनी लेखिनुले पनि साहित्यका मुद्दा उठ्दैनन् । विषय धेरै छन् उठाइनुपर्ने । न सरकारको ध्यान साहित्यको सम्वृद्धिमा गएको छ न गैरसरकारी संघसंस्थाको । सबैको आँखा पर्ने गरी अब दैनिक पत्रपत्रिकाले पनि साहित्यलाई स्थान दिनुपर्छ । पछिल्ला केही वर्षयता दैनिक अखबारले स्थान दिन थालेका छन्, जुन खुसीको कुरो हो । तर यसलाई सुरुवात मानेर अझ गर्नुपर्छ ।
२८.साहित्यिक पत्रकारिताको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : वुधबार, 15 कार्तिक, 2069